Xilliga uu billaaban doono La Liga, qaabka ay kooxaha u…
By jojo Last updated May 18, 2020
(Madrid) 17 Maaajo 2020. Xiriirka kubadda cagta dalka Fransiiska ee magacooda loo soo gaabiyo RFEF iyo maamulka horyaalka La Liga ayaa meel iska dhigay khilaafkooda, waxaana ugu dambeyn ay ku heshiiyeen habka lagu dhammeystiri doono horyaalka dalka Spain xilli ciyaareedkan.
Luis Rubiales iyo Javier Tebas ayaa meel mariyay qodobka 5-aad ee Xeerka Dhaqanka Suuban oo labaduba ay la saxiixdeen madaxweynaha Golaha Isboortiga Irene Lozano si ay goob joog u ahaadaan oo ay xalliyeen liiska kulamada iyo sida xilliyada kulamada loo qabanqaabin doono inta ka harsan xilli ciyaareedka.
Kubadda cagta Spain ayaa soo laaban doonta bisha Juun iyada oo la ciyaari doono maalin kasta oo ka mid ah Toddobaadka waxaana ku jira kulammada Isniinta, iyadoo ay jirto xaddidaad ah in kooxna aysan laba jeer ciyaari karin muddo 72 saacadood.
Sida ciyaaraha loo tabin doono iyo xilliyada kulammada la baasan doono maalin kasta ma ahan kuwa lasoo gabagabeynayo.
Maaddaama la galayo bilaha xagaaga oo cimilo ahaan kulul, kulammada qaybaha dalka Spain ee cimilo ahaan qabow waxaa kulammada la billaabi doonaa saacadda Spain marka ay tahay 20:00 (8pm), halka dhulalka kulul ciyaaraha lagu ciyaarayo iyaguna la baasan doono 23:00 (11pm).
Heshiiska ayaa si rasmi ah loo shaacin doonaa marka uu ogolaado Garsoore Andrés Sánchez Magro Maadaama maxkamadaha sharciga ay xalliyeen dhibaatada kulamada ciyaaraha LaLiga ee bishii August ee sanadkii hore.
Sánchez Magro ayaa ansixiyay kulammada Jimcaha, balse waxa uusan wali ansixin kulammada Isniinta. Go’aanka ayaa hadda si ku meelgaar ah loogu laaban doonaa si xilligan loogu dhammeeyo waqtigiisa.
Luis Rubiales, oo markii hore kasoo horjeeday kulamada habeenka Isniinta maaddaama uu dareemay inay ciqaab u tahay taageerayaasha, wuxuu bedelay maskaxdiisa isagoo qorsheeyay in kulamada lagu ciyaari doonaa albaabada oo xiran.
Dhanka LaLiga, in maalin kasta kullan la ciyaaro Toddobaadkii waxay la micno tahay in koox ciyaartay habeenka Isniinta aysan ciyaari doonin Khamiista.
Ciyaarista labo kulan oo Toddobaadkii ah ayaa u ogolaaneysa La Liga in la soo gabagabeeyo 29-ka July, waana xilliga ay UEFA u dejisay dhamaan horyaalada yurub in la soo gabagabeeyo iyadoo tartanka Champions League uu dib u bilaabmi doono 2-da Agoosto, sidoo kalena fiinaalka uu ka dhici doono Istanbul 29.